२ जेष्ठ २०७८, आईतवार २३:१४ PM
बार्सिलोनामा कसले लाउला अब १० नम्बरकाे जर्सी ?
१५ भाद्र २०७७, सोमबार १३:१० मा प्रकाशित
२०७७ भाद्र १५ साेमबार, काठमाडौं । बार्सिलोनामा १० नम्बर जर्सीको जती अरुको महत्व छैन । यो जर्सी यसकारण पनि विशेष छ कि यसलाई बार्सिलोनाकै सर्वाधिक सफल खेलाडी लियोनल मेस्सीले लगाउँछन् ।
उनले जसै क्लब छाड्ने घोषणा गरे अब लियोको जर्सिमा को देखिन्छन् भन्ने चर्चा चुलिँदै गएको छ । मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय गरेपनि क्लब उनलाई मनाउन प्रयासरत छ ।
बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ बार्तेमोउले मेस्सी क्लबमा रहे आफु पदबाट समेत राजिनामा दिने बताइसकेका छन् । तर, लगातार क्लब ब्यवस्थापन र प्रशिक्षकसँग पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका मेस्सीले आफ्नो अडान बदलेका छैनन् ।
मेस्सीको बर्हिगमन निश्चित भएपछि अहिले उनले लगाएको जर्सी कसले लगाउने चर्चा चुलिएको छ । मेस्सीले क्लब छाड्ने घोषणा गरेपछि क्लबका अर्का खेलाडी मार्टिन ब्रेथवेट बार्साको जर्सी नम्बर १० लगाउन इच्छुक देखिएका छन् । तर, उनलाई क्लबले तुरुन्तै १० नं. जर्सी दिनेमा शंका छ ।
मार्काका अनुसार मेस्सी बार्सा छाडेर गएको अवस्थामा ब्रेथवेटले १० नम्बरको जर्सी लगाउने भनेर प्रस्ताव गरेका छन् । तर, बोर्डका अधिकांश पदाधिकारीहरु मेस्सीलाई कम्तिमा एक सिजन क्लबमै रहेर फ्रि ट्रान्सफरमा बाहिरिन सुझाब दिइरहेका छन् । मेस्सीले क्लबबाट विदा लिएपनि १० नं. जर्सी तत्काल कुनै खेलाडीलाई हस्तान्तरण गर्न क्लबले चाहेको छैन । मेस्सी जस्तै क्षमतावान खेलाडीलाई मात्र उक्त जर्सी लगाउने अधिकार हुने प्रशंसकहरुको भनाई छ ।
तत्काल बार्सामा मेस्सीको स्थान लिने खेलाडी अझै नभएकोले केही समय उक्त जर्सी खाली राखेर नयाँ सिजनमा खेलाडीको प्रदर्शन हेरेर जर्सी वितरण गरिनुपर्ने राय छ । क्लबका मेस्सीको स्थान दिन सक्ने खेलाडीका रुपमा अन्सु फातीलाई लिइएको भएपनि उनले अझै क्लबका लागि धेरै गर्नु पर्नेछ ।
क्याटलान क्लबका समर्थकले मेस्सीलाई जान दिन नहुने बताइरहेका छन् । बार्सिलोनाले आज सोमबारदेखि प्रि–सिजनको प्रशिक्षण सुरुवात गर्दैछ । त्यसका लागि आइतबार क्लबले सबै खेलाडीको कोरोना परीक्षण गराएको थियो । तर क्लबका कप्तान मेस्सीले भने आइतबार कोरोना परीक्षण नगराएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
मेस्सीले आफू क्लबको सदस्य नरहेको संकेत गर्न कोरोना परीक्षण नगराएको अनुमान गरिएको छ । च्याम्पियन्स लिगमा बायर्न म्युनिखसँग ८–२ को लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि मेस्सी क्लबप्रति निराश छन् ।
गतवर्ष मेस्सीले नेमारलाई बार्सामै ल्याउने प्रयास गरेका थिए । आफूले चाहेको खेलाडी बार्सामा अनुबन्ध गर्न नपाउँदा मेस्सी निराश थिए । क्लब पनि यो सिजन उपाधि विहिन भयो ।
क्लबले भर्खरै नियुक्त गरेका नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानसँग पनि मेस्सीको असन्तुष्टी छ । कोम्यानले हालै आफ्ना मिल्ने सहपाठी लुइस स्वारेजलाई क्लबबाट हटाउने प्रयास गरेपछि मेस्सी झनै रिसाएका छन् ।